Kungani uFlex no-Apollo Bazonqoba | Martech Zone
ISonto, Ephreli 1, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izolo ebusuku ngichithe ubusuku nabangane bami.
Amahora ama-3 okuqala asetshenziswe ku Imingcele ukusebenza kusayithi leklayenti ebelinama-quirks wesiphequluli esinqamulelayo. Isiza sabhalwa nge ephelele, esebenzayo CSS. Kodwa-ke, ngeFirefox 2 kwi-PC uhlu lwemenyu olunamachashazi lube nokushintsha kwamaphikseli amabi naku-Internet Explorer 6, enye yezindlela zeCSS ayisebenzanga nhlobo.
IFirefox 2 (hlola ukuthi ukushintsha kwe-pixel okungajwayelekile okwenza ibukeke icishe ibe ngethalikhi):
Nakhu okufanele ibukeke:
Iqiniso lokuthi Apple, I-Mozilla, Microsoft, Futhi Opera abakwazi ukubhala izicelo ezisebenzisa i- Izinga lewebhu kufanele kube namahloni kulowo nalowo kubo. Ngingaqonda ngokuphelele ukuthi ngabe isiphequluli ngasinye besinezici zaso ezingasekelwa ngesikripthi sabo - kepha lokhu kuyinto eyisisekelo.
Lesi yisibonelo esihle sokuthi kungani Apollo futhi Flex sethubeni elihle lokushanela i-Intanethi. Ngabhala ezinsukwini ezimbalwa ezedlule mayelana I-Scrapblog, uhlelo lokusebenza olubhalwe ku-Flex (futhi lufakwa ngokushesha ku-Apollo). Uma ungazange ube nethuba lokukubona - hamba uyozama - akuyona into emangazayo.
UFlex ugijima ngaphansi Ama-Adobe Flash's i-plugin yesiphequluli. Le yi-plugin ukuthi 99.9% kakhulu ye-Intanethi isebenza (usebenza njalo uma ubheka ividiyo ye-Youtube). I-Apollo isebenzisa injini efanayo kepha ikuvumela ukuthi usebenze ewindini lesicelo kunokukhawulelwa kusiphequluli.
Kusukela I-AdobeUhlaka lwesicelo se-Flex luqukethe i-MXML, i-ActionScript 3.0, kanye nomtapo wezincwadi we-Flex. Onjiniyela basebenzisa i-MXML ukuchaza ngokusobala izinto zohlelo lokusebenza lomsebenzisi futhi basebenzise i-ActionScript kumqondo weklayenti nokulawulwa kwenqubo. Abathuthukisi babhala ikhodi yomthombo ye-MXML ne-ActionScript besebenzisa i-Adobe Flex Builder? IDE noma isihleli sombhalo esijwayelekile.
Ngokunaka ukukhungatheka kwethu ekwakheni imenyu elula yesiphequluli, cabanga uzama ukwakha lonke uhlelo lwewebhu olusekelwa kuzo zonke iziphequluli! Ekugcineni, abathuthukisi kufanele babhale ama-hacks noma iskripthi esiqondene nesiphequluli ukuqinisekisa isipiliyoni esifanayo kungakhathalekile ukuthi uluhlobo luni lwesiphequluli noma ideskithophu. Azikho izingqinamba zesiphequluli futhi inzuzo eyengeziwe yokufaka kalula uhlelo ku-Apollo ukuze ungene noma uphume kusiphequluli.
Ngaphandle kokungakhathazeki ukuthi kubukeka kanjani kusiphequluli ngasinye, kunezinye izinzuzo. Ukubhalela uFlex kwenza hhayi kudinga amakhono wokuhlela asemthethweni. Ngicabanga ukuthi yingakho abahleli abaningi bochwepheshe behleka usulu ngokusebenzisa i-Flex noma i-Adobe. Bangathanda ukuthi usebenzise amashumi ezinkulungwane zamaRandi ekubeni nabo bathuthukise isici ku-ASP.NET ethatha imigqa embalwa ye- I-MXML.
Uma ungathanda ukuhambisana noFlex no-Apollo, bhalisela ibhulogi yomngane wami uBill.
ITeororati Relaunches Tools Page… namanye Amathuluzi Apholile!
Ngo-Apr 2, i-2007 ku-7: 08 AM
Kusho kahle uDoug. Uma abafana bezobuchwepheshe bezentengiso bekuthola, nginethemba elikhulu lonjiniyela abaningi 😉
Ngo-Apr 4, i-2007 ku-3: 28 AM
> Le yi-plugin esebenza nge-99.9% ye-Intanethi
Ungahle ufise ukuhlola umthombo wakho waleso sibalo…
Nakhu, ngo-Ephreli 2007 futhi angisenayo iklayenti le-flash elisebenza ngaphansi kwemvelo yedeskithophu yami ye-Ubuntu x86_64 (AMD64).
Ngo-Apr 4, i-2007 ku-9: 55 AM
UStephen - uqinisile… lesi yisibalo esingaqinisekisiwe. Eqinisweni, yilokho okwaziwa njenge- I-SWAG.
Ngo-Apr 16, i-2007 ku-11: 43 AM
Nasi isixhumanisi mayelana nokungena kweFlash - njengamanje ukungena kwe-84.3% ngeFlash Player 9.
Aug 21, 2007 ngo-11: 15 PM
Kushiwo kahle uDoug, ukungena okuhle kukaStephen.
Aug 27, 2007 ngo-2: 30 PM
Hmm .. Lobu buchwepheshe buyathakazelisa ngempela. Angiyena umqambi wohlelo, kepha njengoba ubhala akudingi. Wenze kahle, ngizohamba ngiyokuhlola.
Okthoba 22, 2007 ngo-9: 18 AM
I-athikili ethakazelisa kakhulu, izocabanga ngakho.